Waxgaradka magalada Godey oo Digniin culus u diray Gudomiyaha Gobolka. | ogaden24
Waxgaradka magalada Godey oo Digniin culus u diray Gudomiyaha Gobolka.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magalada Godey ayaa mamulka Gobolka ku Eedeeyay Ficilkii aan laga Fiirsan ee shalay kadhacay magalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeele.
Xidhiidh Ogaden24 uu lasameeyay Qaar-kamida waxgaradka magalada Godey ayay si cad ugu Eedeeyeen Maxamed Adan Aflow oo ku magacaaban Gudomiyaha Gobolka Shabeele iyo kuxigeenkiisa, is Hortaagi lagu sameeyay shacabkii soo dhowaynayay Wafdiga ONLF.
Waxgaradku sheegeen in shacabka Godey 100% Taageersan yihiin Qadiyada Jabhada ONLF waxayna ku Hanjabeen inaysan u dulqaadan doonin Ficilada Noocan oo kale ah ee kudhisan masayrka inay kusoo Noqdaan magalada Godey.
Adeer wixii maanta dhacay waxay ahaayeen wax ceeb iyo dhag-xumo ku ah dadka deegaankan waxaana si kutalagal ah u sameeyay Ninka meesha lakeenay iyo kuxigeenkiisa oo ciidanka milateriga ku dalbaday dadkii maxasta ahaa ee soo dhowaynta nimankaa iskood isugu soo baxay” ayuu yidhi mid kamida Odayaasha magalada oo ka Gaabsaday inaan magaciisa baahino.
Odayga waxaa uu sheegay in Qaar-kamida dadkii isu soo baxay ay dhibaato u Gaysteen ciidanka milaterigu waxaanu intaa kudaray in uusan Maxamed Aflow sii Joogi doonin Hadii uusan Raali Galin kabixin meel kadhaca uu ku sameeyay dadka ree Godey.